डिजाइनरहरूको लागि २2500०० भन्दा बढी नि: शुल्क संसाधनहरू पत्ता लगाउनुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
२,2500०० भन्दा बढी नि: शुल्क संसाधनहरू पत्ता लगाउनुहोस्
जोस एन्जेल | | सामान्य, पुनरावृत्त, ट्यूटोरियलहरू
जब हामी ब्रसेसको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी स्वतन्त्र संसारको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यहाँ धेरै छन् जुन तपाईंसँग तपाईंको फोटोशपमा हुनेछ विभिन्न मोडलहरू र अझै, जब तपाईं इन्टरनेटमा उद्यम गर्नुहुन्छ, तपाईंले धेरै पाउनुभयो जुन तपाईंसँग थिएन। हामीले २2500०० भनेका छौ र यो अनन्त देखिन्छ। पक्कै पनि तपाइँ पहिले नै भएको एउटा मा ठक्कर, तर सबै को बीच, कति छैन?
खैर, यी दुई हजार पाँच सय, विभिन्न कोटीहरूमा तयार पारिएका छन्। यो तपाईंलाई आवश्यक ब्रशको प्रकार पत्ता लगाउनको लागि यसले सजिलो बनाउँदछ। आइकनबाट बनावट, सामाजिक नेटवर्क को माध्यम बाट। र यो यो हो कि तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ, सामाजिक नेटवर्कहरूको आइकनहरू धेरै परिवर्तनशील छन्, यहाँ तपाईं अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको वेबसाइटको लागि अधिक नवीन र बढी सम्भाव्य छ।
1 ग्राफिक डिजाइन र दृष्टान्त
2 अन्य स्रोतहरू: ट्यूटोरियलहरू
3 थ्रीडीमा उपहार
ग्राफिक डिजाइन र दृष्टान्त
कुनै पनि काम गर्न तपाईलाई केहि स्रोतहरू चाहिन्छ। यस सेक्सनमा हामी लिंकहरू एक्सपोज गर्न जाँदैछौं ताकि तपाईंलाई आवश्यक सबै चीजहरू पाउनुहोस्। वा आवश्यक नभए पनि तपाईं ती सबैबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई नबिर्सनुहोस्, लिंकहरू शैलीभन्दा बाहिर जान्छन् र तपाईंको कम्प्यूटरमा स्पेयर पार्ट्स हुनु राम्रो हुन्छ।
यहाँ 40 विभिन्न प्रकारको बनावट उच्च रिजोलुसनमा नि: शुल्क।
तपाइँको व्यवसायको साथ प्रचार गर्नुहोस् यी ब्रोशरका २१ टेम्प्लेटहरू.
यद्यपि यदि व्यवसाय तपाइँको लागि गइरहेको छैन, वा तपाइँको कन्सर्टहरू सिर्जना गर्ने हो, फाइदा लिनुहोस् २० प्रकारका फ्लायर तपाइँका घटनाहरूको लागि।
जे होस् क्रिसमस सकियो, यहाँ तपाईं जानुहुन्छ १० प्रोजेक्टहरू अर्को वर्षको लागि, तिनीहरू कहिले पनि शैली बाहिर जान्छन्।
पत्ता लगाउनुहोस् तपाईंको विचारहरूको लागि आइकनहरू.
यदि तपाइँ आइकनहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ एकीकृत गर्न को लागी तपाइँको सामाजिक सञ्जालहरू वेब मा, यहाँ यसको एक महान विविधता छ। तपाईलाई परीक्षण ट्युबमा चाहिन्छ भने पनि!
डाउनलोड गर्नुहोस् 300 नि: शुल्क भेक्टरहरू बसिलिक कम्पनी, तिनीहरू धेरै संसाधन हुन्।
स्रोतका रूपमा स्रोतहरू, यदि तिनीहरू फेसन फेरी हुन्छन्, यहाँ तपाईंसँग उत्तम छ भित्तिचित्रको बारेमा sources 56 स्रोतहरू। वा। 48 ट्याटूको बारेमा उत्तम फन्टहरू.
Si buscas fondos de pantalla, 8 तपाईंको रचनात्मकता लाई प्रेरित गर्न दिइन्छ, जुन धेरै निश्चित छ।
र सधैं जस्तोयी शानदार संसाधनहरू समाप्त गर्न जुन सृजनात्मकब्लक र अन्य वेबसाइटहरूले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछन्, तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ The० सब भन्दा राम्रो नि: शुल्क ब्रशेसको तलको लिंकमा: Free० नि: शुल्क ब्रशेस। मलाई आशा छ तपाईंले रमाईलो गर्नुभयो।
अन्य स्रोतहरू: ट्यूटोरियलहरू
संसाधनहरू सँधै ब्रश, बनावट, आइकन वा डाउनलोड गर्न योग्य उपकरणको अन्य प्रकारको रूपमा आउँदैन तपाईंको फोटोशपको लागि। तपाईं तिनीहरूलाई एक ट्यूटोरियलको रूपमा भिडियोको रूपमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईंसँग पहिलेको प्रशिक्षण छैन भने, तपाईं सजिलैसँग एक क्लिकले यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सत्य हो कि धेरै उत्तम ट्यूटोरियलहरू अ English्ग्रेजीमा बुझाइन्छ तर यो पनि हो कि थोरै अन्तर्ज्ञानको साथ हामी यसलाई भिडियोमा के व्याख्या गर्दछ भनेर बुझ्न प्रबन्ध गर्दछौं।
YouTube, Vimeo जस्तै प्लेटफार्मलाई धन्यवाद ... अन्तरक्रियाशीलता, रोक्न र खेल्न सक्षम हुनु, यसले हामीलाई एक अर्कालाई बुझ्न र स collect्कलन गर्न पनि सजिलो बनाउँदछ कि केवल एक केन्द्रमा जानु अघि तपाईं सक्नुहुन्थ्यो। यो पनि सत्य हो कि यो सँधै राम्रो हुँदैन, तर, यदि तपाईं च्यानलमा जानु भन्दा अर्कै तरिकाले फाइदा लिन सक्नुहुन्न भने। यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु भन्दा अलि बढी जान्नु राम्रो हुन्छ।
र जे होस् जब हामी यो संसारमा शुरू गर्दछौं हामी पहिलो फोटोमा फोटोशपको सहारा लिन्छौं, इलस्ट्रेटर वा अन्य कार्यक्रमहरू जस्तै आत्मीयता फोटो, तिनीहरू पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। किनकी तिनीहरू भेक्टर तरीकाले काम गर्छन् र हामीलाई स्क्र्याचबाट आईकनहरू सिर्जना गर्न अझ ठूलो स्वतन्त्रता दिन्छ, उदाहरणका लागि। यहाँ छ इलस्ट्रेटरको बारेमा १०० अचम्मको ट्यूटोरियलहरू। रेट्रो ग्राफिक्सबाट लोगोमा।
टाइपोग्राफीको बारेमा हामीले अघिल्लो स्रोतहरूमा हेर्‍यौं, त्यहाँ धेरै ट्यूटोरियलहरू छन् एउटा अनौंठो लुक दिन। यदि सुरुबाट र फोटोशपमा तपाईंले खोज्नु भएको कुरा यही हो भने, तपाईं यहाँ जानुहुन्छ। Great उत्कृष्ट ट्यूटोरियल कसरी टाइपोग्राफी परिमार्जन गर्ने ताकि यो थ्रीडीमा देखिन्छ, धातुको पक्ष वा छविमा एकीकृत।
धेरै पटक हामी केहि देखाउन आवश्यक छ, जस्तै नयाँ कपडा डिजाइन, जुन राम्रो देखिदैन जुन यो एक 3D मोडेलमा एकीकृत नभएसम्म। यहाँ तपाईंसँग जनावरहरू, पुतलाहरू र आफ्ना विचार पोशाकहरू राख्न प्रोप्सहरू छन्. २ free नि: शुल्क थ्रीडी मोडेलहरू.
र जब तपाईं यी डिजाइनहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि तिनीहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने धेरै प्रयास पछि वा तपाईं आफ्नो टाउको पहिलो पटक भएको भंग गर्न चाहनुहुन्न। यी पहिलो ट्यूटोरियलहरू हेर्नुहोस् र तपाइँसँग यो कसरी गर्ने भनेर एक राम्रो विचार हुनेछ।
शुरुआतीहरूको लागि ट्यूटोरियल। वा तसर्थ तिनीहरूले यसलाई उपनाम दिए।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » २,2500०० भन्दा बढी नि: शुल्क संसाधनहरू पत्ता लगाउनुहोस्
ADE- एनिमेशनहरू भन्यो
धेरै चीजहरू भुक्तान गरिन्छ
ADE-Animations लाई जवाफ दिनुहोस्
नि: शुल्क फोटोशप ब्रशेस